Foset Enterprises Ihu Mgbanwe Na Ndozi nke uloanumaanu, Ike Ileghara The Upgrading Of Talent - Viga foset Manufacturer
Home blog Foset Enterprises Ihu Mgbanwe Na Ndozi nke uloanumaanu, Ike Ileghara The Upgrading Of Talent
Datebọchị ： 2020-11-01 Categories ：blog Nlele ： 4
N'ime ebili mmiri nchebe gburugburu, ọ na-adịwanye elu, ihe ndị ahịa na-achọ na-arịwanye elu, mmepụta na-echekarị ọgụgụ isi, "mgbanwe na mmelite" nke echiche ahụ bụ nke eboro n'ihu ụlọ ọrụ ọkpọkọ mmiri.
N'ime ebili mmiri nchebe gburugburu, ọ na-adịwanye elu, ihe ndị ahịa na-achọ na-arịwanye elu, mmepụta na-echekarị ọgụgụ isi, "mgbanwe na mmelite" nke echiche ahụ bụ nke eboro n'ihu ụlọ ọrụ ọkpọkọ mmiri. Industrylọ ọrụ ahụ kwuru, “kwesịrị ịbụ site na njikwa, akara, imewe, onyinye, ụkpụrụ, iguzosi ike n’ezi ihe, nchedo gburugburu, ngosipụta, ọrụ, teknụzụ, akụkụ iri nke nkwalite ahụ. Enwere ike ijikọ ụlọ ọrụ na nke ọ bụla, otu nzọụkwụ iji mezue. ” N'etiti ha, ndị talent "nweta nkwalite" bụ ọtụtụ nke foset ụlọ ọrụ tinye ukwuu mkpa efere.
Fosetlọ ọrụ ndị na-eche ihu mgbanwe na nkwalite ụlọ ahịa, enweghị ike ileghara nkwalite ikike (netwọọdụ isi mmalite onyonyo)
Gbado Anya Na Ndị Ọrụ Ihe Ọmụma
Nke mbụ, ụlọ ọrụ ọkpọkọ na-adịkarị njikere itinye ego buru ibu iji webata talent. Na nyocha na mmepe, imewe, njikwa, ahia na ndi oru ndi ozo na iwebata onye isi bu itinye otutu ego. Nke abuo, na-ekwusi ike na nkuzi nke ndi oru na oru oru. Iji mee ka ndị ọrụ nweta "nghọta nke uto", ịhazi nzukọ ọmụmụ ihe n'ime ụlọ bụ ihe ụlọ ọrụ na-emekarị. Maka ndị na-esepụta ihe kwesịrị ịnabata ihe ọhụrụ, ụlọ ọrụ na-ahazi ha “ịpụ” ịmụ ihe. N'ikpeazụ, iji mee ka talent kwụsie ike, tinyekwuo ego. Onye isi foset bụ iji mee ka ikike ahụ kwụsie ike, ọ bụghị naanị site na ụgwọ na uru, kamakwa site na ọtụtụ nkwukọrịta, yana mmetụta iji jigide talent ahụ, iji gbochie mfe ịzụlite ikike kacha mma ndị ọgbọ ha gwuru.
Ekwesiri ikwu na ụlọ ọrụ ọkpọkọ maka ire ahịa, imepụta na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi dị ezigbo mkpa, yabụ ihe ọmụma ha na ikike ha iji kwalite ọsọ ahụ dịkwa oke ọsọ. N'ezie, ewepụla akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ n'ihi oke oke, ogo nwelite ahụ adịghị ngwa.
Iwusi Ihu-Oru Operation Staff Training
Upgraghara ịkwalite ndị na - arụ ọrụ n’iru ga - eme ka ogo ngwaahịa na ahụmịhe nke ikpeazụ rute aka onye na - eri ya. Dị ka anyị niile maara, ọtụtụ n'ime ogbako ụlọ ọrụ n'ozuzu ọrụ na ngwaahịa, mmata ọrụ adịghị elu, na usoro mgbakọ nke ọrụ ogologo oge, na-eme ka ha ghara inwe ohere ịpụ maka ọzụzụ, mmụta. Ndị na-ahụ maka ihe ọmụmụ anaghị enwekarị ike ịnye onye ọrụ ọ bụla nkọwa zuru oke banyere usoro nhazi ahụ, yana ihe achọrọ siri ike dịka usoro ahụ arụchara.
Omume nke ndị na-arụ ọrụ n'ihu, ọnọdụ na-ekpebi ogo ngwaahịa ahụ. Ọkachamara ọkachamara nke ndị na-ere ahịa mgbe a na-ere ahịa, nke na-ekpebi ahụmịhe ọrụ ahụ ozugbo. Ya mere, foset enterprise talent upgrading abụghị naanị ịhụ “nọdụ n'ọfịs”, kamakwa ọ ga - ahụ “na ogbako ahụ, na ahịrị mbụ”.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụfọdụ ụlọ ọrụ achọpụtala nke a wee bido iwebata talent na ntụziaka nke nrụpụta (igwe, mma, lọjistik) na teknụzụ (igwe, ntinye), ma mejuputa "ọzụzụ nkwonkwo", "njikwa klaasị" na "Mentor-led onye na-amụ ọrụ ”ụdị ọzụzụ The ”70-20-10 ″ mmụta na mmepe nlereanya nke 70% na-na-na-ọrụ ntụziaka, 20% ọrụ ịnye ọzụzọ na 10% klas ọzụzụ na-emejuputa atumatu. Atụmatụ atụmatụ nke ndị ọkachamara mere atụmatụ njikwa (nnyemaaka / onye isi ọrụ - onye isi otu - onye isi ụlọ ọrụ) na ọkachamara ọkachamara (obere, etiti na okenye). Ndu site na isi, jiri nwayọ mee ka ndị ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe banye n'ọmụmụ ihe ahụ.
N'okwu, talent bụ akụkụ kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ, na ụlọ ọrụ ọkpọkọ na-eche mgbanwe na nkwalite nke ụlọ ahịa ahụ, enweghị ike ileghara nkwalite nke talent. Mee ezigbo ọrụ nke ndị ọrụ ihe ọmụma na ndị ọrụ arụmọrụ na-arụ ọrụ, mmepe nke ụlọ ọrụ ọkpọkọ ga-enweta nnukwu mmụba n'ihu.
Mbụ: Sdị Foset Mara Mma | Ntinye nke Igwe Igwe Naanị Otu Nzọụkwụ Asaa
Next: Gbanwee Ọnọdụ nke Industrylọ Ọrụ, uclọ Ọrụ Ntugharị Needlọ Ọrụ Mkpa Iji Nwee Mgbanwe Marketingzụ ahịa Oge A